Waa Kuwee Afar Ciyaartoy Ee Uu Jurgen Klopp Ku Tilmaamay In Ay Ciyaartoy Cusub Kooxdiisa Uga Dhignaan Karaan Xili Ciyaareedka Cusub Kadib Tababarkii Maanta? - Gool24.Net
Waa Kuwee Afar Ciyaartoy Ee Uu Jurgen Klopp Ku Tilmaamay In Ay Ciyaartoy Cusub Kooxdiisa Uga Dhignaan Karaan Xili Ciyaareedka Cusub Kadib Tababarkii Maanta?
Kooxda Liverpool ayaa maanta dib ugu soo laabatay xarunta tababarka kooxdeeda ee Melwood iyada oo Jurgen Klopp uu soo dhaweeyay qayb ka mid ah ciyaartoyda kooxdiisa kowaad iyo kuwo da’yar ah.
Inkasta oo xidigo Liverpool ka mid ahi ay qayb ka yihiin tartamada qaramada Afrika iyo South America isla markaana ay kuwo kale ku maqan yihiin fasax dheeraad ah oo laga siiyay in ay UEFA Nations League ka qayb galeen, haddana Klopp ayaa ciyaartoy badan maanta ku haystay Anfield.
Liverpool waxaa koobka qarada Afrika kaga maqan Sadio Mane iyo Mohamed Salah iyada oo waliba Sadio Mane uu haddaba xulkiisa Senegal uu ku hogaamiyay siddeed dhamaadka tartankan.
Roberto Firmino iyo Alisson Becker ayaa isku diyaarinaya finalka Copa America ee xulkooda Brazil uu la ciyaari doono Peru laakiin Van Dijk, Wijnaldium, Henderson, Arnold iyo xidigihii kale ee UEFA Nations League ka qayb galay ayaa fasax dheeraad ah la siiyay.
Shaqiri ayaa baadhitaan lagu samaynayaa kadib dhaawicii ku soo gaadhay UEFA Nations League halka Naby Keita uu ka soo kabsanayo dhaawicii xulkiisa Guinea ku soo gaadhay.
Laakiin Jurgen Klopp ayaa afar ciyaartoy oo maanta xarunta Melwood uu ku soo dhaweeyay waxa uu ku tilmaamay in ay saxiixyo cusub u noqon karaan kooxdiisa Reds xili ciyaareedka cusub.
Jrugen Klopp ayaa da’yarka Rhian Brewster iyo Alex Oxlade-Chamberlain waxa uu ku tilmaamay in ay kooxdiisa uga dhigan yihiin ciyaartoy cusub oo kale isaga oo sheegay in haddii uu Chamberlain taam noqdo in uu la mid noqon doono saxiix cusub oo kale.
Klopp ayaa sidoo kale Adam Lallana oo dhaawacyo la soo tacaalayay xili ciyaareedkii hore iyo da’yarka Joe Gomez waxa uu ku sifeeyay in ay ciyaartoy cusub kooxdiisa uga dhigan yihiin.
Rhian Brewster iyo Alex Oxlade-Chamberlain aayaa ka mid ahaa ciyaartoydii maanta tababarkii ugu horeeyay ku sameeyay Melwood iyada oo Klopp uu si gaar ah farxad ugu muujiyay da’yarka uu doonayo in uu kulamada saaxiibtinimo isku muujiyo ee Brewster.
Klopp oo ka hadlaya Chamberlain ayaa yidhi: “Haddii uu Ox(Chamberlain) taam sii ahaan karo, waxa uu anaga noo noqon doonaa ciyaartoy cusub” ayuu Klopp u sheegay shabakada rasmiga ah ee kooxdiisa Liverpool.
Klopp oo ka hadlaya da’yarka Rhian Brewster ayaa yidhi: ” Waxaa la mid ah Rhian, xaqiiqdii waxa uu isagu leeyahay hibo wayn, waxaanu xaqiiqdii wanaag ka rajaynaynaa in aanu isaga ku aragno tababarka iyo waxyaabaha oo dhan. Anaga door muhiim ah ayay noon oqon kartaa, door muhiim ah ayaanu isaga u qorshaynay, sidaa daraadeed, waa ciyaartoy cusub”.
Klopp ayaa sidoo kale tilmaamay in Joe Gomez iyo Adam Lallana laftoodu ay yihiin sidii ciyaartoy cusub oo kale wuxuuna yidhi: “Sida Joe Gomez in badan waa ciyaartoy cusub, Adam Lallana waa ciyaartoy cusub, ee kadib dhibaatadii badnayd ee sanadkii9 hore, haddii xaqiiqdii ay wiilashu taam ahaan karaan, gabi ahaanba waxay ka badalnaan kartaa sanadkii hore sababtoo ah tayo dhab ah ayaa jirta”.
Klopp ayaa doonaya in ay xili horeba u diyaar garoobaan bilawga xili ciyaareedka cusub isaga oo haddaba ka fikiraya sidii ay ugu diyaar garoobi lahaayeen bilawga Premier league.
Klopp oo arintan ka hadlaya ayaa yidhi: Waxaa waajib nagu ah in aanu xili hore diyaar noqono, waxaanu horyaalka bilaabanaynaa jimce ee kulanka Norwich, waxaa waajib nagu ah in aanu diyaar u ahaano taasina dabcan ma aha ciyaarta kaliya ee aanu isku diyaarinayno”.
#LFCPreSeason starts now! 💪 pic.twitter.com/BgcQHzHuwl
Saxiixa cusub ee Sepp van den Berg ayaa maanta markii ugu horaysay tababare ku qaatay xarunta Melwood wuxuuna sheegay in uu naxsanaa markii uu garoonka tababarka soo galayay balse uu dareemay in uu gurigiisii joogo markii uu shaqaalaha tababarka iyo ciyaartoyda la hadlay.
Day one = running shoes 🔛 #LFCPreSeason pic.twitter.com/NnXwDmeb0Y
Ugu danbayn Liverpool ayaa shaacisay in Naby Keita uu diyaar u noqon doono kulamada saaxiibtinimo ee xili ciyaareedka ka horeeya isla markaana uu tababarka ku soo laaban doono dhamaadka bishan.